INETFLIX 'IQALEKISIWE' IKHUTHAZWE NGUARTHUR LEGEND NGABESETYHINI ABOMELELEYO ABAXHASA ABALINGANISWA NJENGENKOKELI - IINKQUBO ZETV
INetflix ibiluvavanyo kakhulu kuthotho lwayo mva nje. Kwaye uthotho olutsha, Uqalekisiwe yenye yazo. Xa i
INetflix ibiluvavanyo kakhulu kuthotho lwayo mva nje. Kwaye uthotho olutsha, Uqalekisiwe , ngomnye wabo. Xa inoveli iguqulelwa kuthotho lweTV, yifowuni enzima. Kwaye kwenzeka okufanayo kwinoveli, Uqalekisiwe. Inoveli ithetha ngeqhinga elahlukileyo apho abalinganiswa ababhinqileyo belivo lika-Arthurian ngabo abo basetyenziselwa ukwenza iyelenqe elinzima.
iphuma nini i-overlord
Kwaye yile nto intsha yeNetflix-series, Uqalekisiwe konke malunga.
Uluhlu lweNetflix oluqalekisiweyo oluDweliswe ngaBaseTyhini abalinganiswa kwiOg Plot
Olu luhlu luqalekisiwe, kudlala uKatherine Langford, odume ngendima yakhe njengoHanna kwi '13 Izizathu zokuba kutheni 'ibonisa ibali lakhe eliyintlekele. Kolu thotho, uKatherine udlala indawo kaNimue, aka, iNenekazi leLake.
UNimue ngumthandi kaMerlin. Kwaye ufumana ikrele lomlingo kumama wakhe wokukhulisa. Yonke ilali yakhe yahlaselwa kwaye yabulawa. Uxelelwe ukuba athathe ikrele kwisithandwa sakhe, uMerlin.
Njengoko eqhubela phambili ukuhambisa ikrele, uhambo lwakhe luthatha indlela enzima.
Endleleni, wadibana noArthur, owayecingelwa ukuba angadibana naye.
Kodwa ekugqibeleni, waphuma waba ngumntu ophethe ingozi kunye ne-Red Paladins.
Ngaba iNimue iya kubaleka kuMlingo oMnyama ngaphakathi?
Kuwo wonke uhambo lwakhe, uNimue uyaqonda ukuba kuninzi kakhulu kuye kunokuba ayekhe wakwazi.
Njengokuba, ukususela ebuntwaneni bakhe, kukho amanqaku omlingo omnyama kuye.
Ukongeza, usekuqalekisweni kwaye kuya kufuneka aphile nayo ubomi bakhe bonke.
Kwakhona, amandla omelele kangangokuba ekugqibeleni iya kumngenisa.
uphononongo lwamantombazana e-gilmore
Kodwa uNimue womelele kumnqweno kunye nokuzimisela ukutshintsha ikamva lakhe. Njengoko efuna ukwenza okulungileyo kwaye ancede abantu.
Kwakhona, uthotho luzaliswe ziitoni zobundlobongela obukhulu. Sibona umbono ocacileyo wokuchaphazeleka komzimba kunye negazi elitsazayo ukusuka kubanqolobi. Emva koko, kukho ibali elihamba lihamba libuye kunye nexesha elifanelekileyo. Nangona kunjalo, igcina ababukeli bezibandakanya.
isiphelo sokuhlala ubusuku ngokulandelelana
Ewe, ukuza kuthi ga ngoku, inye kuphela ixesha lonyaka. Ayinqumli uhlobo lomlingo kunye namandla angaphezu kwendalo.
Ngapha koko, uthotho luneengalo eziphezulu kungenxa yokuqwalaselwa kwakhona kweArthur Legend kunye neenkulungwane zexesha lengcinezelo.
Nangona kunjalo, ekugqibeleni, ubungqina bombukeli uninzi lweendaba ezigqityiweyo kwisizini yokuqala.
Kodwa oko kuthetha ukuba kuya kubakho iimpendulo ezininzi kwimibuzo ngabalandeli balo mboniso.
Kude kube ngoko masithembe ukuba izinto zizakubangcono kumaxesha ezizayo.
Iimuvi malunga noothixo kunye nezihloko
iingoma zomculo eziphakamileyo
Ukungena kwi-crossover ukuze ubukele
Ukunyuka kwekhuselo lomdlalo we-anime umhla wokukhutshwa
Uluhlu lweefilimu ezothusayo ze-anime